/ब्लग/ग्यालरी/Synephrine HCL पाउडर - फ्याट बर्नर र वजन घटाउने पूरक
प्रकाशित 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
1. Synephrine HCL सिंहावलोकन
आज, जनसंख्याको एक उच्च प्रतिशतले स्वस्थ तौल कायम राख्न विकल्पहरू खोज्दै छ। खैर, ती सबैको बीचमा, प्रयोग Synephrine एचसीएल पाउडर एक बेच्ने तरिकाहरू हो जुन तपाइँ बेमा अस्वास्थ्यकर फ्याट राख्न सक्नुहुन्छ। Synephrine पाउडर एक क्षारीय रासायनिक यौगिक हो कि भेट्न विरलै दुर्लभ छ। यो एक प्राकृतिक पदार्थ हो जो अरूहरूमाझ कडू सुन्तला जस्ता बोटहरूमा पाइन्छ।
यो तीतो सुन्तलामा प्राथमिक बायोएक्टिव पदार्थ हो जसको प्रयोग 1500s को रूपमा प्रारम्भिक हुन्छ। त्यसोभए वास्तवमा केको लागि प्रयोग गरिएको थियो? विगतमा, यो जादुई पूरक कब्ज, अपच, र मतली जस्तै जठरांत्र मुद्दाहरूको उपचारमा प्रयोगमा आयो। विश्वको केही भागहरूमा यो निद्रा र चिन्ताको लागि औषधीको रूपमा प्रभावकारी विरोधाभासको रूपमा पनि चिनिन्छ।
टेक्नोलोजीको आगमनसँगै, कटु सुन्तला अब फ modern्गल र ब्याक्टेरिया संक्रमण, एलर्जी, र पेट समस्या जस्ता अधिक आधुनिक दिनको समस्याहरूको उपचार गर्न बढी उपयोगी साबित भएको छ। मनमा हुनु कि तीतो सुन्तलाको प्राथमिक घटक Synephrine HCL हो, यसले तपाईंलाई यसमा किन धेरै गुणहरू समावेश गर्दछ भन्ने कारण दिन्छ।
Synephrine को पाउडर आणविक संरचना एफेड्रिनको जस्तै छ, जो सबैभन्दा ठूलो फ्याट-बर्न कम्पोनेन्टहरू मध्ये एक हो। यद्यपि Ephedrine डाईटरी पूरकको रूपमा बजारमा अब छैन; तसर्थ, Synephrine यसको उत्तम विकल्प हो। अक्टमाइन सिनफ्रिनको मेटाबोलिट हो र अहिलेसम्म यसको फ्याट-जलेको गुणहरूको लागि प्रख्यात भएको छ।
2. Synephrine HCL- कार्यको संयन्त्र
Synephrine काम गर्दछ शरीरको उर्जा उत्पादन को परिवर्तन को माध्यम बाट। यसले कलेजोको कार्य गर्ने तरिकालाई प्रभावित गरेर गर्छ जसले धेरै इन्जाइमहरू सिर्जना गर्दछ र शरीरमा पाचन र ऊर्जा उत्पादनको नियमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनुसन्धानले देखायो कि Synephrine HCL (5985-28-4);
ग्लुकोसिडेस र एमाइलेज निषेध गर्दछ, जुन जटिल स्टार्चको पाचनका लागि जिम्मेवार इन्जाइमहरू हुन्। नतिजा रूपमा, यो सम्भावना छैन कि पछि खाना पनी रगत चिनी स्पाइक हुनेछ।
यसले AMPK को उत्तेजना मार्फत मांसपेशिहरुमा ग्लूकोजको सेवन बढाउँदछ। त्यो एन्जाइम हो जसको कार्य कोषहरूमा ईन्धनको स्तर बुझ्नुका साथै फ्याटहरू जलाउन उत्प्रेरित गर्नु हो। थप रूपमा, यसले कोषहरूमा चिनीको मात्रा बढाउँदछ।
Synephrine ले उपलब्ध ATP को मात्रा बढाउँछ। यसले कलेजोमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूमा सहयोग पुर्‍याउन बढी उर्जा प्रदान गर्दछ।
यसले चिनीलाई फ्याटमा रूपान्तरण गर्न पनि रोक्छ।
यसले ग्लुकोज र ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन बढाउँछ।
Synephrine अल्फा -१ र अल्फा -२ adrenoreceptors को लागी एक कमजोर सक्रियता हो। दुई समारोह एड्रेनालाईन प्रतिक्रिया गरेर एक रक्तचाप र मुटुको दर वृद्धि। त्यसकारण, Synephrine 1 2-२5985-। ले तपाईंको मुटुको दर वा रक्तचापमा बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन।
त्यो एफेड्रिन र सिनेफ्रिन 5985 28-२-4- between बीचको मुख्य भिन्नता हो, किनकि एफेड्रिन दुबै अल्फा -१ र अल्फा -२ एड्रेनोरसेप्टर्स सक्रिय गर्न जानिन्छ।
Synephrine HCL ले न्यूरोमेडिन U2 रिसेप्टर्सहरूलाई पनि उत्तेजित गर्दछ। यी हाइपोथैलेमसमा रहेका अणुहरू हुन् र जसले ब्यूँझन्छ।
विरोधी भडकाउने प्रभावहरू
Synephrine eotaxin-1 को उत्पादन रोक्न काम गर्दछ। यो अणु हो कि इयोसिनोफिललाई इशारा गर्छ फुलेको ठाउँमा जान। यसले NADPH ऑक्सीडेस गतिविधि पनि रोक्दछ, जुन न्यूट्रोफिलले उत्पादन गर्दछ र फलस्वरूप, धेरै प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिहरू सिर्जना गर्दछ।
एनएफ-केबी को सक्रियता को कटौती को माध्यम बाट, Synephrine जलन कम गर्दछ। त्यो किनभने ओभरएक्टिभ एनएफ-केबीलाई सोरायसिस, ईन्फ्लेमेन्टरी आन्द्रा रोग, र दम जस्ता ज्वलन्त रोगहरूको लागि ज्ञात छ।
Synephrine butyrylcholinesterase र acetylcholinesterase एंजाइमहरू रोक्न काम गर्दछ, जुन अल्जाइमर बिरामीहरूको लागि हानिकारक हुन्छ।
3। Synephrine HCL प्रयोग
(१) वजन घटाउन Synephrine HCL
Synephrine एक वजन घटाने पाउडर कि धेरै मा काम गर्दछ।
एक रूपमा भूख suppressant- के तपाई त्यस्तो व्यक्तिको प्रकार हुनुहुन्छ जुन सँधै स्नैक्सि is गर्दैछ? मेरो मतलब, भारी खाना खाए पछाडि पनि पेट भइहाल्दैन र यसले केही चीजको लागि भीख माग्न थाल्छ। जबकि तपाईं वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ, यो एक चुनौती हो जुन तपाईंले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यवस, यो वजन घटाने पाउडर भोकालाई दबाउँदछ र स्नैक्स गर्न आग्रह गर्दछ, तपाईंलाई छिटो पूर्ण महसुस गराउँदछ।
नतिजा स्वरूप, तपाईं योजना अनुसार तपाईंको स्वस्थ आहार मा छडी र अधिक सहज वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईंले यो नोट गर्नु अघि, तपाईं त्यो पातलो बिकिनी शरीर flaunting हुनेछ तपाईं सँधै सपना देख्नुभयो।
(2) Synephrine HCL फ्याट बर्नरको रूपमा
अधिक बोसो स्वास्थ्य खतरनाक मात्र हो, तर यसले तपाईंलाई नराम्रो देखिन पनि सक्छ। फ्याट जलाउने विशाल लाभका साथ आउँदछ, साथै तपाईंलाई लामो जीवन बाँच्न सहित। भाग्यवस, Synephrine एचसीएल प्रयोग शरीर को बोसो दूर पग्लन गर्न प्रयोग गर्न सकिने एक रणनीति को एक हो। यहाँ छ कसरी यो तपाईं यो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ;
वर्कआउट सेसनको बखत ऊर्जा स्तर बढाउनुहोस्
तपाइँ जिममा जानु हुँदैन र सबै थकित र निद्रा महसुस गर्नुपर्दैन; Synephrine तपाईंलाई मिल्यो। यो एक ईन्धनको रूपमा कार्य गर्दछ तपाईलाई सबै उर्जा संग खुवाएर तपाईलाई एक हत्यारा कसरत सत्र। चूहों संग प्रशासित सिफिफाइन पाउडर लामो समय सम्म पौडी खेल्न सक्षम भएको देखियो, उनीहरूको उर्जाको स्तर बढेको देखाउँदै।
उर्जा स्तर सुधार गरेर, Synephrine एथलेटिक प्रदर्शन पनि बढाउने गरीन्छ। फ्याट र उत्तेजनाको बढ्दो ऊर्जा खर्चको संयुक्त प्रभावले प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ र दुवै एरोबिक र एनेरोबिक व्यायामबाट प्राप्त आउटपुटको मात्रालाई बढाउँदछ। यसले एक उत्तम पूर्व कसरत अनुपूरक बनाउँछ र बोसो पगाल्ने धेरै।
बाह्रजना पुरुषहरूमा गरिएको एक अध्ययनले देखायो कि व्यायाम हुनुभन्दा पहिले weight weight मिनेट वजन लिनेको पाउडर लिएपछि उनीहरूको अधिकतम भार भार बढ्यो। तिनीहरू पनि प्लेसबोको तुलनामा अधिक पुनरावृत्तिहरू गर्न सक्षम थिए। क्याफिनको साथ संयोजनमा, Synephrine ले विषयहरूको अधिकतम स्क्वाट पुनरावृत्तिहरू वृद्धि गर्‍यो।
त्यो शरीरमा फ्याटहरू भत्काउने प्रक्रिया हो। यो मेटाबोलिज्मको रूपमा राम्रो वर्णन गरिएको छ। Synephrine ले एकको मेटाबोलिक दर बढाउँदै काम गर्दछ त्यसैले एक जलाउने ईन्धन छिटो बनाउँदछ। यसले यो बुझाउँछ किन Synephrine लिनाले तपाईं बढी बोसो जलाउने बनाउछ जब मेटाबोलिज्म अधिक छ, तपाईंको शरीर सम्भावित भण्डारित बोसो अधिक प्राप्त गर्न पुग्छ।
यसमा गरिएको अनुसन्धानले देखाए कि 50mg को एक खुराकको साथ, बेसल मेटाबोलिक दर अर्को पचहत्तर मिनेटको लागि 65 क्यालोरीले वृद्धि भयो। जब अन्य अणुहरू हेस्परिडिन र नारिनिनसँग मिसाइन्छ, तब मेटाबोलिक बूस्ट एक सय अस्सी भन्दा बढी क्यालोरीमा देखिएको थियो। यस्तो क्यालोरी बीस मिनेट दौडको साथ जलाइन्छ।
Synephrine हड्डीको मांसपेशीले ग्लूकोजको उत्तेजनालाई उत्तेजित गरेर काम गर्दछ। यसले रक्त प्रणालीबाट अत्यधिक ग्लूकोज हटाउने माध्यमबाट बोसो जलाउन मद्दत गर्दछ। यसले ग्लुकोजको साथ मांसपेशीहरू प्रदान गर्न योगदान पुर्‍याउँछ जुन दक्षताका साथ ऊर्जाको लागि प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ, अधिक इन्ट्रामस्क्युलर ग्लूकोजको अर्थ मांसपेशीहरूको अधिक शक्ति र आवाज हुन्छ।
4. Synephrine HCL Dosage
Synephrine HCL खुराक एक व्यक्ति बाट अर्कोमा फरक हुन्छ। जे भए पनि,aको रूपमा मानक खुराक वजन घटाने पाउडर प्रति दिन 100mg हो। अनुसन्धानले, तथापि, n 35mg को Synephrine HCL खुराक पनि प्रभावकारी छ भनेर देखाउँदछ। को Synephrine HCL खुराक विषाक्तताबाट बच्न एक दिनमा 200mg भन्दा बढि हुनु हुँदैन।
यदि यो तपाईको पहिलो पटक हो भने, सहिष्णुताको आँकलन गर्न लगभग 10-20mg को कम खुराकको साथ सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईं हानिकारक साइड इफेक्टबाट ग्रस्त हुनुहुन्न भने, तपाईं बिस्तारै खुराक वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। खुराक अन्तराल दुईदेखि चार घण्टा भन्दा बढि नबढाउनुहोस्, किनकि यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ।
Synephrine बॉडीबिल्डि or प्रभावको लागि वा फ्याट बर्नरको रूपमा, तपाईंले बिहानको पहिलो चीज लिनु पर्छ र व्यायाम अघि पन्ध्रदेखि तीस मिनेट। यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई पानी साथ ले।
जहाँ केहि व्यक्तिहरू Synephrine लाई आफैले लिन रुचाउँछन्, अरूले यसलाई स्ट्याक गर्न रुचाउँदछन्। तपाईं यसलाई अन्य वजन घटाउने पाउडरको साथ संयोजनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र ती पनि जसले तपाईंको ऊर्जा बढावा दिन्छन्। Yohimbine Synephrine संग राम्ररी स्ट्याक गर्दछ, विशेष गरी यदि तपाइँको मुख्य लक्ष्य तौल घटाउनु हो भने।
L-theanine पनि राम्रो विकल्प हो किनकि यसले कुनै पनि उत्तेजकसँग राम्रोसँग मिल्छ। यसको प्रकार्य प्रभावहरूलाई सहज पार्नु र संज्ञानात्मक प्रकार्य बढाउनु हो। यसको synergistic प्रभावहरूको लागि सेतो विलो बार्क पनि स्ट्याकमा समावेश गर्न सकिन्छ।
क्याफिनले पनि राम्रो समावेशीकरण गर्दछ, यसको शुद्ध अहाइड्रोस फारममा होस् वा ग्यारेन्टा एक्स्ट्र्याक्ट जस्ता अन्य स्रोतहरूबाट।
5. Synephrine HCL अनलाइन खरीद गर्नुहोस्
कुनै श doubt्का बिना, Synephrine HCL वजन घटाउने पाउडरको पवित्र ग्रेइल हो। यसले तपाईंको भोक कम गर्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईं कम खाने वा अस्वास्थ्यकर नाश्ता लिन कम गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो भोक कम गर्न निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ Synephrine पूरक चौबीस घण्टा को लागी यदि तपाई छिटो आकारमा जान चाहानुहुन्छ।
साथै, लेखमा देखिएझैं यसले तपाईंलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ, जुन धेरै सहयोगी हुन्छ, विशेष गरी जब तपाई बाहिर काम गर्न चाहानुहुन्छ र कम खाए हुन्छ। जतिबेला यो लात लिनका लागि लाग्छ, तपाइँ तीस मिनेट भित्रमा विश्वास गर्नुहुन्न, तपाइँ प्रभावको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रभाव तपाइँ लाई लगभग दुई घण्टा लामो हुन सक्छ Synephrine आधा जीवन दुई घण्टा पछि।
यदि सम्वेदनशील आहार र व्यायामको साथ संयोजनमा प्रयोग गरियो भने, तपाईंले Synephrine बॉडीबिल्डिंग र वजन घटाउने प्रभाव दुई हप्ता प्रयोग देख्नुहुनेछ। जो कोही उनीहरुका लागि खाजा खाने, अत्यधिक सेवन गर्ने, वा उनीहरूको शरीरबाट केही फ्याट हटाउन चाहने जस्तो लाग्ने स with्घर्षको लागि, यो वास्तविक सम्झौता हो!
अधिकांश फ्याट बर्नरहरूले तपाईंलाई साइड इफेक्टबाट पीडित बनाउनका लागि परिचित छन्, तर के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि Synephrine ले तपाईंको शरीरलाई जोखिममा नराखी यी सबै प्रदान गर्दछ? धेरै Synephrine समीक्षा कम से कम शून्य साइड इफेक्ट को रिपोर्ट र लोकप्रियता को कुनै आश्चर्य छ।
अब जब तपाईं आफ्नो तौल लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दृढ संकल्प हुनुहुन्छ, तपाईं कहाँ यो फ्याट बर्नर पाउनुहुन्छ? धेरै कम्पनीहरूले तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ Synephrine प्रस्ताव गर्न सक्ने जति धेरै कम्पनीहरूले तपाईंलाई नक्कली उत्पादनहरू बेच्न सक्ने रूपमा धेरै सावधान हुनुपर्दछ। हामी तपाइँलाई तपाइँको पैसाको लागि मूल्य दिन्छ Synephrine सप्लीमेन्टहरू प्रदान गरेर जुन सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। एक पटक तपाईं Synephrine किन्नुहोस् हामीबाट तपाईलाई भरोसा छ कि तपाईले बोसो जलाउनु हुनेछ र चाँडै र स्थायी रूपमा बोसो गुमाउनुहुनेछ।
हाम्रो वजन घटाउने पूरक जोखिम मुक्त पुन: किनभने तिनीहरू १००% प्राकृतिक छन् कुनै गोप्य थप बिना। आज हामीबाट 'चमत्कार' वजन घटाउने पाउडर अर्डर गर्नुहोस् र अनावश्यक पाउन्ड कम गर्नुहोस् साथै Synephrine बॉडीबिल्डिंग लाभहरूको मजा लिनुहोस्।
श्यान एम। टैलबट, क्यारी ह्युजेस द्वारा, पृष्ठ १ 13 का पूरक आहारहरूको लागि स्वास्थ्य पेशेवरको गाईड,
मोटापा: एपिडेमियोलोजी, पाथोफिजियोलजी-एण्ड प्रिभेन्सन, दोस्रो संस्करण, डेबासिस बागची, हेरी जी। प्रेस द्वारा संपादित, पृष्ठ 538
खेल र व्यायाममा पौष्टिक पूरक, माइक ग्रीनवुड, डगलस कलम्यान, जोस एन्टोनियो, पृष्ठ 231 द्वारा लिखित
अपपिटेंट पाउडर पोप्रोपेटिकल विलक्षण र उल्टीको लागि प्रयोग गरिन्छ
शरीरको बिरुवा, खुट्टा, र चक्रमा कच्चा प्रायरोन (मेस्ट्रोलोन)
कसरी पायिडिडोसाइन हाइड्रोक्लोराइड (भिटामिन B6) शरीर सौष्ठवहरूको लागि काम गर्दछ	ओर्लिस्टेटले वजन घटाउने औषधिको रूपमा कसरी काम गर्दछ?